Android 4.0 နှင့်အထက် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့်ကို Manual နည်းနဲ့တင်ရအောင် - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Fonts Mobile Fonts နည်းလမ်းများ မြန်မာဖောင့်ပြဿနာများ Android 4.0 နှင့်အထက် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့်ကို Manual နည်းနဲ့တင်ရအောင်
Android 4.0 နှင့်အထက် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာဖောင့်ကို Manual နည်းနဲ့တင်ရအောင်
Maung Pauk at 5:12:00 PM Fonts, Mobile Fonts, နည်းလမ်းများ, မြန်မာဖောင့်ပြဿနာများ,
Samsung Glaxy S3 မှာ မြန်မာစာကို Manual နည်းနဲ့သွင်းကြည့်ရင်း အဆင်ပြေတယ်.. တစ်ခြား ဖုန်းတွေမှာလည်း လုပ်ကြည့်ပြီးသလောက် အဆင်ပြေတဲ့အတွက် Android Version 4.0 နှင့်အထက်တွေမှာ မြန်မာစာ မမှန်တဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းဟောင်းလေး တစ်ခု ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. 4.1.2 ထိ အဆင်ပြေတာတွေ့ရပါတယ်.. တစ်ခြားလူ အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ အာမမခံနိုင်ပါ. ကျွန်တော် အဆင်ပြေလို့သာ တစ်ခြားလူတွေလည်း လုပ်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
မြန်မာ font ပေါ်ရင် ပြီးပြီ ဆိုသူများအတွက်တော့ အောက်ပါ fontchanger ကို install လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
မြန်မာ စာပေါ်ရုံဖြင့် အားမရသေးဘူး။ display ထဲက font style မှ english font style များကို design စုံ ပြောင်း ချင်သူများအတွက်တော့ အောက်ပါနည်းကို သုံးရပါမည်။
အောက်ပါနည်းကို သုံးလျှင် မြန်မာ font နှင့် English font များကို အဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်သော်လည်း တခြား တရုတ် font များကိုတော့ မြင်တွေ့ရမှာ မဟုတ်တော့ပါ။
လိုအပ်သော root explore နှင့် droidsanfallback.ttf ကို အောက်တွင်ဒေါင်းပါ။
၅။ system/fonts ကို ရောက်လျှင်ညာဘက် အပေါ်ဒေါင့်က Mount R/W ကို နှိပ်ပြီး Mount R/O ဖြစ်အောင်ပြောင်းပါ။ ပြီးလျှင် paste လုပ်လိုက်ပါ။ overwrite လုပ်မလားလို့မေးရင် Yes ကိုရွေးလိုက်ပါ။
၈။ အခုဆိုရင်တော့ samsung 4.0 အထက် ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာကိုလည်း ကောင်းကောင်း မြင်၇သလို၊ English စာကိုလည်း design မျိုးစုံနဲ့ ဖတ်လို့ ရေးလို့ရပါပြီ။
မောင်ပေါက် < Knowledge Note >
ဒီပို့စ်ကို http://freemobilesharing.blogspot.com က ရခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Credit ပေးပါတယ်ခင်ဗျာ..
Fonts, Mobile Fonts, နည်းလမ်းများ, မြန်မာဖောင့်ပြဿနာများ
Fonts Mobile Fonts နည်းလမ်းများ မြန်မာဖောင့်ပြဿနာများ
မောင်ပေါက် July 26, 2013 at 11:13 AM
Huawei တွေမှာတော့ Emotion UI ပါလာပါတယ်.. အဲဒီဖုန်းတွေမှာ ဒီနည်းမလိုပါဘူး.. Themes ထည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်.. ကျန်တဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်မှာ ပြောခဲ့သလို လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ငသတ်တွေ. သဝေထိုးတွေ လွဲနေတာကို အမှန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Huawei အတွက် မြန်မာစာပါတဲ့ Themes ကို http://www.maungpauk.org/2013/06/huawei-emotion-ui-one-click-mm-font.html မှာ ဒေါင်းပါ..
အော်လန်း August 30, 2013 at 8:21 PM
note 10.1 n8000 ကို root လည်းဖောက်လိုက်တယ် 4.1.2 ဖြစ်အောင်လည်း firmware လည်းပြောင်းပေး
ပါလျက်နဲ note ရေးတဲ့အခါမှာ ကြ။ ပြ စ သည်ဖြင့်ရေးတဲ့အခါြ ကြ ပ ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာ ဘာဖြစ်လို့လည်း
Unknown September 21, 2013 at 9:06 PM
Jelly Bean 4.1.2 ကိုမြန်မာစာမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ....Lenovo Idea A1000 ပါ....root လဲဖောက်ပြီးပါပြီး....ဇော်ဂျီဖောင့် နဲ့ ကီးဘုတ်ထည့်ပြီးသွားပါပြီး....မြန်မာလိုမှန်အောင်ဖတ်လိုမရ...ရိုက်လိုမရလို
မောင်ပေါက် September 22, 2013 at 4:18 PM
http://www.maungpauk.org/search/label/Mobile%20Fonts မှာ အဆင်ပြေတာတွေ တင်ပေးထားပါတယ်..
IDM ( Internet Download Manager ) 6.35 Build5Full
Blog Archive March (3) February (6) January (3) November (3) October (21) September (14) August (3) July (3) June (1) May (6) December (7) October (3) September (3) August (8) July (10) June (1) May (24) April (35) March (6) February (2) January (9) December (28) November (7) October (1) September (6) August (11) July (23) June (26) May (11) April (11) March (16) February (14) January (10) December (10) November (28) October (19) September (15) August (18) July (54) June (45) May (32) April (60) March (57) February (54) January (54) December (35) November (40) October (35) September (24) August (89) July (61) June (34) May (61) April (27) March (39) February (48) January (84) December (68) November (51) October (23) September (19) August (30) July (13) June (19) May (5) April (7) March (18) February (136) January (37) December (44) November (29) October (50) September (72) August (45) July (48) June (35) May (27) April (30) March (28) February (8)